साहित्यकार कृष्ण बजगाईंसँग कुराकानी | samakalinsahitya.com
- बुटवल टुडे
साहित्यकार कृष्ण बजगाईंसँग बुटवलबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका बुटवल टुडेले गरेको कुराकानी
१) कस्तो पुस्तक हो ‘युरेसियाको स्पर्श’?
‘युरेसियाको स्पर्श’ बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग र चीनको यात्राका क्रममा मैले अनुभूत गरेका संस्मरणहरु हुन् ।
२) उक्त कृति पढेर पाठकले के पाउलान् ?
नियात्रा पढ्दै गर्दा पाठकहरुलाई मसँगसँगै यात्रा गरेको अनुभूति हुने छ । ती देशका कला, साहित्य, संस्कृति, इतिहास आदिको जानकारी पाएर पाठकहरु बाहिरी संसारसँग परिचित हुनेछन् ।
३) उता र यतामा के फरक पाउनु भयो ?
साहित्य, कला र संस्कृति राष्ट्रको धरोहर हुन् । तिनको सम्वद्र्धन गरे मात्र राष्ट्र सम्बृद्ध हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरुले धेरै अघि बुझे । हामीमा त्यस बारेमा अहिलेसम्म चेत आएको छैन । हाम्रो देशमा राज्यले निर्वाह गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण दायित्वबाट पन्छिएको देखिन्छ ।
४) तपाईं सोह्रसत्र वर्ष विदेश बस्दा बल्ल नियात्रासङ्ग्रह आयो । किन ढिला भएको होला ?
परदेशमा साहित्य सिर्जना सजिलो छैन । ब्यस्त दिनचर्याले लेखनमा बाधा हालिरह्यो । त्यसमा पनि नियात्रा भन्दा अन्य विधाका पुस्तक प्रकाशनमा लागेको कारण नियात्रा प्रकाशनमा अलिक ढिला भएको हो । विदेश पुगेपछि प्रकाशन भएको यो मेरो सातौं कृति हो ।
५) तपाईंको र अरुका नियात्रा लेखनमा के भिन्नता छ?
हरेक लेखकका आआफ्नै लेखन शैली र कला हुन्छन् । नियात्रा भनिसकेपछि मूल रुपमा फरक हुदैन । मैले हतारमा कुनै नियात्रा लेखेको छैन । जुन स्थान वा विषयको बारेमा लेखेको छु त्यसको बारेमा खोज अनुसन्धान गरेर नयाँ जानकारी पाठक समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु । मेरो नियात्रा पढिरहँदा पाठकहरु प्रसस्त सूचना ग्रहण गर्दै साहित्यिक रसस्वादन गर्ने छन् भन्ने लागेको छ ।
६) तपाईं बेलायतमा हुनुहुन्छ, युरेशियाको स्पर्श’लाई स्पर्श गर्न पाठकहरुले कहाँ जाने?
साझा प्रकाशन, पुल्चोक ललितपुरले प्रकाशन गरेको यो पुस्तक साझा प्रकाशनका सबै बिक्री कक्ष र नेपालभरका मुख्य पुस्तक पसलहरुमा उपलब्ध छ ।
७) राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कुनै साहित्यिक संघसंस्थामा संलग्न हुनुहुन्छ कि ?
समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतको संस्थापक अध्यक्ष, समकालीन साहित्य डट कमको सम्पादक÷प्रकाशक, लघुकथा समाज नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय संयोजक, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय कार्यसमिति वासिङ्टन डी सी अमेरिकाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष (२०१०–१२), अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय कार्यसमिति वासिङ्टन डी सी अमेरिकाको महासचिव (२००८–१०) र संस्थापक अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बेल्जियम च्याप्टर (२००७–११) लगायत अन्य साहित्यिक संस्थामा रहेर सेवा गर्दै आएको छु ।
८) तपाईंले प्राप्त गरेका पुरस्कार वा सम्मानहरु कुनै छन् कि ?
सत्यमोहन जोशी शताब्दी पदक नेपाल(२०१६), सुप्रमा साहित्य पुरस्कार बेलायत (२०१६), वैजयन्ती स्रष्टा सम्मान नेपाल (२०१६), भानुभक्त द्विशताब्दी स्वर्ण पदक नेपाल (२०१४), डायास्पोरा नृपध्वज पुरस्कार अमेरिका (२०११), देवकोटा शताब्दी सम्मान नेपाल (२००९) र नारायण जयन्ता लिटरेरी वेब जर्नालिज्म एवार्ड अमेरिका (२००९) मुख्य हुन् ।
९) अन्त्यमा केही भन्न चाहानु हुन्छ कि ?
बुटवल टुडेको लोकप्रियता विदेशमा पनि छ । मैले चिनेका केही मित्रहरुले यसको प्रसंग उठाउने गर्नु हुन्छ । मेरा रुचिका कैयौं साहित्यिक सामग्री र समाचार त्यहाँ गएर हेर्ने गरेको छु । बुटवल टुडेले जनताका सरोकारका विभिन्न विषयमा उठाएको कदम सह्रानिय छ । भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिका लागि पत्रिकामा स्थान दिएर ठूलो गुन लगाएको छ । पत्रिकाको उत्तोरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बुटवल टुडे टिमलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।